Alaab-qeybiyeyaasha Ogsijiin iyo Warshad | Shiinaha Soosaarayaasha Ogsijiin
5L Oxygen Isku-xiraha Dib-u-buuxin kara oo leh Nadaafad Sare 93% (AC, DC, Baytariyada)
ANGELBISS, Midkii ugu horreeyay ee soo saara batteriga adduunka ugu horreeya ee ku shaqeeya 5LPM Oxygen Concentrator. Xitaa soo saar 93% daahir ah O2 at 5L / min socodka.
Taxanaha '' ANGEL5SB '' waa mid ka mid ah 5L oxygen-ka la qaadan karo oo leh nidaamka digniinta ugu dhameystiran, tilmaam qalad sax ah, iyo waxqabadka ugu xasilloon ee suuqa. Waxay dhaaftay shahaadada CE iyo ISO13485.
1. Battery waara oo ku shaqeeya DC 24V
2.Deg deg deg deg ah 120 daqiiqo, socod isdaba joog ah 120 daqiiqo (2 saacadood)
3.5Liter oo leh 93% ± 3% soosaarka nadiifinta oksijiinta ee loogu talagalay dadka isticmaala COPD
4.Oxygen daahir ahaanta Muuqaal ee Nambarada (Sax ah 00.0%)
5.Timer & Taabo badhamada ku shaqeeya
6.Large 6 'LED Light Soo Bandhig dhammaan macluumaadka shaqeynaya
7 Wadarta saacadaha socda
8.Waxaa loo isticmaali karaa aagagga deegaanka heerkulkiisu sarreeyo (45ºC), joog sare (15000feet).
1.Batarigii ugu horreeyay adduunka wuxuu shaqeeyaa 5LPM @ 93% Isku-xirka Oxygen.
AngelBiss waxay sidoo kale siisaa bukaan socod eegto iyo isbitaalo yar yar oo urursadayaal badan oo oksijiin qulqulaya oo u dhexeysa 10LPM ilaa 100LPM.
Macaamiisha ayaa sidoo kale u habeyn kara kiciyeyaasha oksijiinta meelo badan oo oksijiin ah iyada oo loo eegayo baahidooda. Waxaan aqbalnaa qaabeynta qalabka cadaadiska badan ee oksijiinta (cadaadiska ugu badan ee oksijiinta ayaa gaari kara 6 bar). Iskudhinta oksijiinta cadaadiska sare leh ayaa lagu xiri karaa hawo-mareenka daran si loo siiyo oksijiin loogu talagalay bukaannada culus.
Iskuxirka Caafimaadka Oxygen
Isbitaalada waaweyn ee leh dhuumaha keena oksijiinta, AngelBiss waxay ku siin kartaa nidaam hawo oksijiin caafimaad oo leh awooda ugu badan ee 200 Nm³ / hr, taas oo buuxin karta baahida oksijiinta ee sariiraha 1,000 ee isbitaalka. Ogsijiinta ay bixisay nidaamka sahayda ogsijiinta ee loo yaqaan 'AngelBiss oxygen' ayaa waafaqsan heerarka caafimaad ee ay ku dheehan tahay nadiifnimada oksijiin ee 93% (93% ± 3%).
Teknolojiyada Caafimaadka ee AngelBiss